iCloud နှင့် Google ပြက္ခဒိန်များကိုအလွယ်တကူစည်းညှိနိုင်ပုံ။ အိုင်ဖုန်းသတင်း
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Apple ဂေဟစနစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးရှိထားသော်လည်းအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင်ဂူးဂဲလ်၏နေရာအနှံ့ရှိနေခြင်းကများသောအားဖြင့်သင်သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုကိုအသုံးပြုရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ iCloud နှင့် Google Calendar ပြက္ခဒိန်များကိုမည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်နိုင်သည် အလိုအလြောကျ, ဒါကယနေ့ငါတို့အားရှင်းပြဖို့သွားကြသည်အရာဖြစ်တယ်။
၎င်းသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတွင် Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်၌ Google Calendar ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအတင်းအကျပ်ပြုလျှင်၎င်းသည်အလွန်အဆင်ပြေသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုသည့်လျှောက်လွှာများကိုနာရီနှင့်ငွေရှာဖွေရန်မလိုပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇာတိဝန်ဆောင်မှုများကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းအားအလိုအလျောက်နှင့်အခမဲ့ပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်။
2 ၁ ။ iCloud မှမျှဝေပါ
3 ၂။ Google Calendar သို့တင်ပါ
ဒီပြက္ခဒိန်တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ဖို့အဆင်မပြေမှုနှစ်ခုကိုလက်ခံရမယ်။ ပထမတစ်ခုကဒါ iCloud ပြက္ခဒိန်ကိုလူသိရှင်ကြားဝေမျှရမှာပါ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်လုပ်ဆောင်လိုသည်၊ အချို့ကိစ္စများတွင် (ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်) အဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာထို link ကိုထုတ်လုပ်ထားသူမည်သူမဆိုပြက္ခဒိန်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုရရန်မလွယ်ကူပါ။
ဒုတိယအားနည်းချက်မှာထပ်တူပြုခြင်းသည် iCloud မှ Google သို့တစ်နည်းသာဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်မှသင်ထိုပြက္ခဒိန်များထဲမှမည်သည့်အရာများကိုမဆိုပြုပြင်လို့မရပါ။ အဆင်မပြေမှုတစ်ခုထက်ပိုပြီးကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်၎င်းသည်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင့်အနေနှင့်ဤအရာသည်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါကဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောဤရွေးချယ်စရာသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
၁ ။ iCloud မှမျှဝေပါ
ပထမအဆင့်မှာ iCloud အကောင့်မှပြက္ခဒိန်ကိုဝေမျှရန်ဖြစ်သည်။ ကသည် ကွန်ပျူတာ browser မှ iCloud.com ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်ပြီးပြက္ခဒိန် option ထဲမှလှိုင်းလေးလုံး၏ icon ကိုနှိပ်ပါ (ဥပမာ WiFi အိုင်ကွန်) မျှဝေခြင်းရွေးချယ်စရာများကိုဖွင့်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Public Calendar option ကိုသက် ၀ င်စေပြီး၎င်းအောက်ရှိပေါ်လာသော link ကိုကူးယူပါ။
၂။ Google Calendar သို့တင်ပါ
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်ကိုကွန်ပျူတာ၏ဘရောက်ဇာမှရယူရမည် ပင်မမျက်နှာပြင်တွင် URL မှပြက္ခဒိန်တစ်ခုကိုထည့်ပါ, screenshot မှာညွှန်ပြအဖြစ်။
သက်ဆိုင်ရာအကွက်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ကူးယူခဲ့သော URL လိပ်စာကို paste လုပ်ထားသော်လည်းဂူးဂဲလ်သို့မထည့်သွင်းမီတစ်ခုခုပြုလုပ်ရမည်။ ၀ က်ဘ်ပြက္ခဒိန်၏ပထမအပိုင်းကို "http" အဖြစ်ပြောင်းရမည်။ ဒါကြောင့်ပုံရိပ်ထဲမှာပေါ်လာသကဲ့သို့။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Calendar တွင်ပေါ်လာစေရန် "Add Calendar" ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီစစ်ဆင်ရေး iCloud ပြက္ခဒိန်များများလိုအပ်သလောက် ထပ်မံ၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်ရှိပြက္ခဒိန်တစ်ခုစီ၏ရွေးချယ်မှုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အမည်၊ အရောင်စသည်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » iCloud နှင့် Google ပြက္ခဒိန်များကိုလွယ်ကူစွာစည်းညှိနည်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်များအတိုင်းလုပ်ပြီးပြက္ခဒိန်၏ PC ဗားရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ပြုလုပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုမွမ်းမံပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အစကကျွန်ုပ်အားမိုဘိုင်း၏ဖြစ်ရပ်များကိုပြသသည်မှန်လျှင်၊ ပြက္ခဒိန်ကိုဖန်တီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ iphone => pc သည်မပြောင်းပါ၊ ချက်ချင်း)
လူးဝစ်မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ iCloud ပြက္ခဒိန်ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပြီးသည်နှင့်၎င်းပြက္ခဒိန်၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ ဖြစ်ရပ်များသည်ထိုအခိုက်အတန့်၌ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်ထပ်တူထပ်မံညှိနှိုင်းခြင်းများမရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မဆိုအကြံပြုချက်?
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ။ အဆင့်များကိုစစ်ဆေးပါ
ငါကအဲန်ဒရက်စ်နဲ့တူတယ်၊ အကြိမ်တစ်ထောင်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ် iPhone ထဲသို့ထည့်သည့်အရာကို Google ပြက္ခဒိန်တွင်မတွေ့ရပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!! မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေအများကြီးကိုရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်မှာငါ .... ခဏတာမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်
the din ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး iCloud ပြက္ခဒိန်တွင်ကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သောအဖြစ်အပျက်များသည် Google ပြက္ခဒိန်တွင်မပေါ်ပါ။ တစ်ခုခုပြောင်းလို့ရမလား
ဒါဟာငါအတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်ပျက်။ ငါဒီအဆင့်တွေကိုလုပ်တယ်။ (မတူညီတဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေနဲ့ငါစမ်းကြည့်တယ်) ပြီးတော့အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့အသစ်တွေမပေါ်လာတော့ဘူး၊ ငါ့ကိုသတိမပေး၊ ၎င်းသည်ရှိပြီးသားသတင်းအချက်အလက်နှင့်တူသော်လည်းအသစ်တစ်ခုသည်၎င်းကိုမွမ်းမံပါ။ မည်သူမဆိုအခြားမည်သည့်နည်းလမ်းသိ? ငါဒီပြက္ခဒိန်ဒဏ်enseာရီများအတွက် wow တစ်ခု iPhone ကိုဝယ်ဖို့ရန်ငြင်းဆန်, wow ။ သို့သော်လည်းငါသည်အလုပ်သမားပြissuesနာများအတွက်လိုအပ် !!
Itñigo Iturmendi ဟုသူကပြောသည်
Íñigo Iturmendi ကိုစာပြန်ပါ
ကောင်းတယ် ငါအခြားမည်သည့် link ကိုအတွက်သတင်းအချက်အလက်ရှာမတွေ့ပါ။
Ricardo Galache ကိုပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းသော post ကို။ ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒံယလေက Duarte ဟုသူကပြောသည်
Daniel Duarte အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ပြက္ခဒိန်များကိုတပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည်။ သို့သော် iCloud ပြက္ခဒိန်တွင်သတိပေးချက်အသစ်တစ်ခုထည့်သောအခါ gmal ပြက္ခဒိန်တွင်မွမ်းမံပါ။
ငါ Google Calendar တွင် Apple ပြက္ခဒိန်၏အဖြစ်အပျက်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ရန်ငါထပ်တူပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့အနာဂတ်မှာအလိုအလျောက်စည်းညှိလိမ့်မည်လား (သို့) ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်တွင်အဖြစ်အပျက်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးတိုင်းငါလုပ်ရမလား။
အခြားဆက်သွယ်မှုများ (TOC) သည်သင်၏အစီအစဉ်နှင့်လုံးဝသီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်
Tile Sport သည်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကြော့ရှင်းသော tracker ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်